Baadhitaanka kansarka naasaha ayaa dhibaato weyn u geysan kara dumarka da 'kasta ha lahaadeene. Tani waa sababta Xirfadlayaasha Caafimaadka Haweenka ay mudnaanta u siiyaan caafimaadka iyo badbaadada dhammaan haweenka doonaya daryeelka kahortagga. Haddii aad ka baqayso helitaanka waxa ugu horreeya mammografi, looma baahna in laga walwalo. Kooxdayada takhasuska leh ayaa ka jawaabi kara su'aalahaaga ku saabsan adeegan imaging sare iyo hubi in si buuxda lagugu wargaliyay nidaamka.
Ogaanshaha kansarka naasaha goor hore wuxuu kordhiyaa fursadahaaga badbaado wuxuuna yareynayaa halista inaad ku weyso mid ama labada naas ee mastektomi. Ururada sida Ururka Dhakhaatiirta Mareykanka iyo Bulshada Cancer-ka Mareykanka waxay kula talinayaan haweenka jira 40 iyo wixii ka weyn inay helaan raajada naasaha ee sanadlaha ah si loo raadiyo kansarka naasaha. Laakiin maxaa dhacaya haddii kansarka naasaha ku dhaca qoyska? Jadwal jadwalka ballan kooxdeena Columbus, OH, si aad u hesho macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan adeeggan muhiimka ah.
Mammogram ayaa sharaxay
Raajada naasaha waa raajo sawir ka qaadaysa nudaha naaskaaga. Waxaa loogu talagalay in lagu aqoonsado meelaha walaaca laga qabo ama kansarka suurtogalka ah. Baaritaanka naasaha waxaa loo baahan yahay marka bukaanku muujiyo astaamaha, halka baaritaanka mammogram lagu ogaado arrimaha ka dhalan kara bukaannada aan lahayn astaamo haba yaraatee. Labaduba waxay ku lug leeyihiin in la qaato qiyaas yar oo shucaac ah naasaha.
Mammogram ka hortag ah ayaa si dhakhso ah loo sameeyaa oo waxay noqon kartaa mid aan raaxo lahayn maxaa yeelay naasaha ayaa fidsan inta hawshu socoto. Tani waxay yaraynaysaa soo-gaadhista shucaaca waxayna noo oggolaanaysaa inaan yeelano sawir sax ah oo naasahaaga ah. Si kastaba ha noqotee, raaxo-darri kasta waa mid ku-meel-gaadh ah oo guud ahaan dumarka badankood way u dulqaadan karaan. Xarunteena waxay kaloo bixisaa MammoPad® horumarsan, barkinta naaska oo bixisa dusha ka ilaalin jilicsan inta udhaxeysa naaskaaga iyo mashiinka naaska.
Kuliyada Dhaqtarka iyo Cilmiga Haweenka ee Mareykanka waxay soo jeedineysaa haweenka da'doodu tahay 40 iyo wixii ka weyn inay jadwal u sameeyaan baaritaanka sanadlaha ah ee Columbus, OH. Si kastaba ha noqotee, haweenka leh taariikhda qoyska ee kansarka waxay u baahan karaan mammogram kahortag ah kahor 40. Inta lagu guda jiro qiimeynta naasahaaga ee Xirfadlayaasha Caafimaadka Haweenka, waxaan dib u eegi karnaa taariikhdaada caafimaad waxaana sameyn karnaa talooyin ku saleysan baahiyahaaga. Waxyaabaha halista u ah kansarka naasaha waxaa ka mid ah:
Ehelka (walaasheed, hooyo, gabadheeda) oo qaba kansarka naasaha
Waxaan sidoo kale dalban karnaa raajo mammogram haddii aad isku aragto calaamado sida korriin aan la sharxin, dheecaan aan caadi ahayn, iyo maqaarka naaska oo yaraada.
Sida jadwalkaaga loo sameeyo mammogramkaaga
Xirfadleyda Caafimaadka Haweenka waxay sameyn karaan raajada naasaha si gooni ah ama isla waqtigaas imtixaankaaga sanadlaha ah. Waxaan kugula talineynaa inaad jadwalkan u dhigatid usbuuca ka dambeeya caadadaada. Tani waxay yareynaysaa waxyeelooyinka aan raaxo lahayn sida caabuqa, bararka, iyo jilicsanaanta naasaha. Diyaar u noqo inaad keento wixii sawirro ah ee hore ee raajada naasahaaga ah ee ballantaada. Haddii aad leedahay naaso lagugu rakibay, fadlan la socodsii xubin ka tirsan kooxdayada kahor.
Waxbadan ka baro mammogram
Waxaan fahamsanahay in fikradda ka hortagga naasaha iyo baaritaanka kansarka naasaha ay cabsi gelin karto. Kooxda tayada sare leh ee ku takhasusay Xirfadlayaasha Caafimaadka Haweenka waa ilahaaga daryeelka dumarka wanaagsan, adeegyada mammography, iyo inbadan. Xafiiskeenna ku yaal Columbus, OH, wuxuu kaloo bixiyaa tikniyoolajiyad casri ah natiijooyinka ugu saxsan ee suurtogalka ah. U wac xubin ka mid ah shaqaalaheena si aad jadwal ugu sameyso ballantaada naaska oo aad hawsha u bilowdo maanta. Waxaan ku faraxsanahay inaan nahay xulashada ugu fiican ee aagga daryeelka caafimaadka haweenka.